October | 2011 | အဓိပတိ
ပါဠိစာပေ လေ့လာကြစို့ (အခြေခံ)
ka kha ga gha nံa
က္က က္ခ ဂ္ဂ ဂ္ဃင်
kka kkha gga ggha nံ
င်္က င်္ခ င်္ဂ င်္ဃ –
nံka nံkha nံga nံgha –
ပါဠိစာပေရဲ့ နှစ်ထပ်ဆင့်ပုံစံများဟာ ပြုချင်သလိုပြု ဆင့်ချင်သလို
ဆင့်လို့ မရပါဘူး အထက်ပါပုံစံကို လေ့လာကြည့်မယ် …..
(1) နဲ့ (2) ကို တစ်တွဲ
(3) နဲ့ (4) ကို တစ်တွဲ
(က)ဟာ ဦးဆောင်သူဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါ ဒါ့ကြောင့် (က – ၂လုံး ) ဆင့်လို့ရတယ်။
(ခ) ဟာ နောက်လိုက်သူလို့မှတ် ဒါ့ကြောင့် (ခ – ၂)လုံး ဆင့်လို့မရဘူးလို့မှတ်ပါ။
ဆင့်မရတဲ့နောက်လိုက် (ခ)ကို နှစ်ထပ်ဆင့်ချင်ရင်တော့ ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ ?
နောက်လိုက်ပီပီ ဦးဆောင်သူ(က)ရဲ့အောက်မှာပဲ(ခ)ဟာ နေခွင့်ရှိပါတယ် ။
ဒါဟာ တရားမျှတပါတယ်နော် ……….
(ဂ)ဟာ ဦးဆောင်သူဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါ ဒါ့ကြောင့် (ဂ – ၂လုံး ) ဆင့်လို့ရတယ်။
(ဃ)ဟာ နောက်လိုက်သူလို့မှတ် ဒါ့ကြောင့် (ဃ-၂)လုံးဆင့်လို့မရဘူးလို့မှတ်ပါ။
ဆင့်မရတဲ့နောက်လိုက် (ဃ)ကို နှစ်ထပ်ဆင့်ချင်ရင်တော့ ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ ?
နောက်လိုက်ပီပီ ဦးဆောင်သူ(ဂ)ရဲ့အောက်မှာပဲ(ဃ)ဟာ နေခွင့်ရှိပါတယ် ။
ဒါလည်းပဲ တရားမျှတပါတယ်နော် ……….
(5)ဟာသူတို့ နှစ်တွဲလုံးကို တွဲခေါ်သွားတဲ့ရထားခေါင်းတွဲနဲ့တူတယ်လို့မှတ်ပါ။
အဲ့ဒီတော့(5)ရဲ့ခေါ်ဆောင်ရာကို လိုက်ချင်ရင် နောက်လိုက်ပဲပေါ့ ……
ဒါဆိုရင် က။ခ။ဂ။ဃ။င။ ဤအက္ခရာ- ၅ – လုံးရဲ့ နှစ်ထပ်ဆင့်ပုံဟာ အဲ့ဒါ အကုန်ပဲ
မှတ်သားရတာလည်း အစီအစဉ်ကျကျနန စီစဉ်ထားတာမို့ မေ့စရာအကြောင်းလည်း မရှိတော့ဘူးလေ ….
ဆရာဝန်ပေးတဲ့ ဆေးကို လိပ်ပတ်လည်အောင်သောက်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာ …
ဆေးငါးလုံး (ကို့စ်) ကုန်သွားပြီနော် ……
ဆေးတွေ ကို့စ် ကုန်သွားပြီဆိုရင် ရောဂါသက်သာမှု့ရှိမရှိ စစ်ဆေးကြည့်မယ်
ဘယ်လိုစစ်ဆေးမှာလဲ ဘာတွေနဲ့စစ်ဆေးမှာလဲပေါ့ ……
ဟုတ်ကဲ့ …. အဲ့ဒါက ဆရာဝန်ဆီသွားစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ ……
ပါဠိစာပေမှာ သရတွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ သိထားရမယ်လေ….
(အ) (အာ) (ဣ) (ဤ) ( ဥ ) ( ဦ ) (ဧ) ( သြ )
( – ) ( –ာ) ( –ိ) ( –ီ) ( –ု) ( –ူ) (ေ-) (ေ-ာ)
အထက်ဖော်ပြပါ သရတွေထဲမှာ ( က ) တစ်လုံးတည်းကို အစားထိုးကြည့်မယ်။
က ကာ ကိ ကီ ကု ကူ ကေ ကော
အထက်ပါ သရ (၈)လုံးထဲကမှ (အ) (ဣ) ( ဥ ) – သရသုံးလုံးကို နာသိကသံဖြစ်တဲ့ နိဂ္ဂဟိတ် ( –ံ) သေးသေးတင် လိုက်ရင် နောက်ထပ်
မိတ်ဆွေ သုံးယောက် ထပ်တိုးလာမယ်လေ ……
(အံ) (ဣံ) ( ဥံ) ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေသုံးယောက်ပါပဲ …….
အဲ့ဒီသုံးခုထဲကို (က) နဲ့ပဲ အစားထိုးကြည့်မယ်ဆိုရင် …….
ကံ ကိံကုံ ….. စသည် ဖြစ်လာတယ်
အထက်ဖော်ပြပါ (၈) နဲ့ မိတ်ဆွေသုံးယောက် ပေါင်းလိုက်တော့(၁၁)လုံးဖြစ်လာတယ် ……. ကြည့်မယ် ….
ကံ ကိံကုံ
.ခ ခါ ခိ ခီ ခု ခူ ခေ ခေါ
ခံ ခိံခုံ
အဲ့ဒီလိုပါပဲခင်ဗျာ …… စ ဆ ဇ ဈ ဉ …… ကိုလည်း ထပ်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းမှတ်သားရပါမယ် …….
စ ဆ ဇ ဈ ဉ
ca cha ja jha a
စ္စ စ္ဆ ဇ္ဇ ဇ္ဈ ည
cca ccha jja jjha a
ဉ္စ ဉ္ဆ ဉ္ဇဉ္ဈ
(၁) တဆင့်စကား အဆင့်ဆင့် ကြားရသည်တို့အပေါ်မှာလည်း အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ချက်မချကြကုန်နှင့်။
(၂) သင်တို့အထက်က ဘိုးဘေးဘီဘင် အစဉ်အဆက်လာ ဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုလည်း အဆုံးသတ် အားကိုးပြီး အဟုတ်မှတ်၍ မကျင့်သုံးကြကုန်နှင့်
(၃) အခြေအမြစ်မပါသည့် သူပြောငါပြော ကောလာဟလ စကားတို့ကိုလည်း လက်ခံမမှားကြကုန်နှင့်။
(၄) ဘာသာရေးကျမ်းစာတို့၏ အရှိန်ဩဇာအောက်မှာလည်း နစ်မြုပ်၍မနေကြကုန်နှင့်။
(၆) အခြားအခြားသောလူတို့ အခြားအခြားသော အယူဝါဒတို့ထံမှ ပုံတူကူး၍ ကျင့်သုံးခြင်းသည်လည်း မိမိတို့ ဘဝနှင့် အပ်စပ်လိမ့်မည်ဟု အတည်တကျ မယူကြကုန်နှင့်။
(၇) မိမိတို့အတွေးအခေါ် အယူအဆကို မိမိတို့၏ အတွေးဖြင့်သာလျှင် အကြောင်းယုတ္တိပေး၍ တင်ပြနိုင်ရုံ မျှဖြင့် ကိုယ့်အတွေး ကိုယ့်ယုတ္တိ ဟုတ်ပြီဟု မယူကြကုန်နှင့်။
(၈) ဆရာတစ်ယောက်ယောက် လာရောက်ဟောပြောချက်သည် မိမိတွေးထင်ထားသည်နှင့် ကိုက်ညီသွားပြီဆို ရုံ မျှဖြင့်လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု မယူဆကြကုန်နှင့်။
(၉) လေးစားထိုက်သော လောကကဂရုပြုနေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ယောက်၏ဝါဒသည် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟူ၍လည်း တစ်ထစ်ချ မယူကြကုန်နှင့်